Tsarovana Ao amin’ny Media Sosialy Ilay Mpihira Iraniana Habib Mohebian · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2016 5:24 GMT
Habib Mohebian. Sary avy amin'ny Wikipedia Commons. CC BY-SA 4.0
Mitatitra ny Mehr News ao Iran fa namoy ny ainy noho ny fijanonan'ny fo tampoka tao avaratr'i Iran ilay Iraniana mpihira sady mpamoron-kira Habib Mohebian. 63 taona i Mohebian, fantatra kokoa amin'ny fanampin'anarany tamin'izao nindaosin'ny fahafatesana izao.
Rehefa nandao an'i Iran tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1980, dia niverina nody ihany i Habib tamin'ny taona 2009. Tamin'ny antsafa tamin'ny taona 2011 nifanaovana tamin'ny Kodoom, nanazava ny zananilahy, Mohamad:
Naniry mafy hiverina ao Iran nandritra ny ela be i Habib, nalahelo ny tanindrazany izy ary tsy nahita antony tsy ahafahana hiasa tao. Leon'ny fandraharahana ara-pialam-boly Persianina tao Los Angeles ihany koa izy …
Nampiavaka azy tamin'ny mpihira maro niaraka taminy ny feony mikatrakatraka sy ny feony mitovy amin'ny besinimaro. Raha tsy dia malaza ivelan'ny Iraniana i Habib, dia nampifandray ny lohahevitra Persiana nentim-paharazana sy ny mozika malaza Tandrefana ny mozikany. Voasarik'i Jimi Hendrix sy John Lennon, ankoatra ny hafa izy.
Notsarovana tao amin'ny media sosialy miaraka amin'ny teny rohy #حبیب (#Habib) i Habib.
Iray amin'ireo hira malaza indrindra an'i Habib ny “Night's Lonely Man (Lehilahy Manirery amin'ny Alina)”. Nilaza izany hira izany ilay mpisera Twitter @persis_design raha nahatsiaro ity mpihira namoy ny ainy ity:
goodbye alone man…#habib #rip #حبیب pic.twitter.com/JM3qLr2PxI
Veloma ry lehilahy manirery
Naneho fahatezerana tamin'ny famoahana ny sarin'ny vatana mangatsiakan'i Habib nofonosina lambam-paty ilay mpisera Twitter miantso ny tenany ho Amir Whiskey. Nipoitra tao amin'ny haino aman-jerim-panjakana Iraniana ny sary. Nihevitra izy fa manelingelina sy tsy mifanaraka amin'ny etika ny famoahana nataon'izy ireo.
خبرگزاری مملکت عکس کفن‌پیج #حبیب رو منتشر کرده! 😑
Namoaka ny sarin'i Habib ao anaty lambam-paty ny sampam-pampahalala vaovao Iraniana 😑 Fantatro fa tsy manana fanajana ho an'ny rariny izy ireo, saingy manana etika arak'asa ve izy ireo? Tsy manam-pahalalana?
Tsy hampanginin'ny fahafatesany ny feon'i Habib. Nisioka i Azadeh hoe:
Na dia maty aza ny mpanakanto, velona ny zava-kantony
Tsy nety raha tsy mizara ny fahatsiarovako manokana ny mozikan'i Habib ny tenako:
Even I have memories of #حبیب-a drive from Tehran to Ahwaz with one cassette playing over and over: the best part of it was Habib Mohebian
Na dia manana fahatsiarovana amin'ny kapila #حبیب nanomboka tao Tehran hatrao Ahwaz amin'ny kasety iray averimberina henoina hatrany aza aho: Habib Mohebian no manana ny ampahany tsara indrindra amin'izany
Mpihira ihany koa ny zanakalahin'i Habib, Mohamad. Niara-nandrakitra ny Javuni (Tanora) tamin'ny taona 2003 izy ireo, izay nalaza teo amin'ireo mpihaino Iraniana ao anatiny sy ivelan'i Iran.
Hofaranantsika amin'ny feon'i Habib manokana.